पल शाहका वकिल पहिलोपटक मिडियामा ।। कहिले छुट्छन पल शाह? - ABNews Nepal
मनोरञ्जन शिक्षा समाचार समाज स्वास्थ्य
पल शाहका वकिल पहिलोपटक मिडियामा ।। कहिले छुट्छन पल शाह?
Feb 28, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, ganga lama, headline nepal, kapurbot tv, latest khabar, latest nepal, latest nepali song, taja khabar, taja khabar nepal, tajakhabar
नायक पल शाहको वकिल परिवार सहित पहिलो सार्वजनिक भए, अब यसरी छुट्ने सम्भावना छ ! अभिनेता पल शाह यतिबेला तनहुँको प्र’हरी हिरासतमा छन् । उनलाई एक १७ वर्षकी किशोरीले इच्छा वि’परित कर णी गरेको भन्दै प्र’हरीमा उजुरी दिएपछि उनलाई प’क्राउ गरी अदालतमा पेश गरिएको थियो । किशोरीले उजुरी दिएको ५ दिन पछि उनी आफै प्र’हरी सम्पर्कमा पुगेका थिए । उनलाई अदालतले ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
आइतवार प्र’हरीको सम्पर्कमा पुगेका उनलाई भेट्न अहिले ठूलो संख्यामा उनका समर्थक तनहुँ प्र’हरी कार्यालयमा भि’ड भएको छ । पललाई भेट्न उनको आफ्नै सहोदर बहिनी लगायत उनका परिवारका केही सदस्य पनि पुगेका छन् । आफुलाई समाजसेवी दावी गर्ने पुण्य गौतमले पनि आफुले पललाई भेटेको बताएका छन् । उनले आफुसंग पलले के भने भन्ने कुरा पनि खुलाएका छन् । पलले आफ्ना शुभचिन्तकलाई सकारात्मक खबर सुनाइदिनु भनेर सन्देश पठाएको पनि गौतमले बताए ।
म आत्तिएको छैन म प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गर्छु मेरो सकारात्मक सन्देश सुनाइदिनु भनेर आफुलाई भनेको गौतमले बताए । आफुलाई प्र’हरी इन्सपेक्टर नरनाथ अधिकारीको सहयोगमा भेट्न पाएको पनि बताए । पलमा कुनै खालको हिनताबोध र निरासा आफुले नदेखेको गौतमले बताए । आफुलाई देखेर पल मुस्कुराएको उनले बताए । पलले आफुलाई प्रहरीले राम्रै ब्यवहार गरेको पनि बताए । पललाई अखबार पढ्न दिन आफुले प्र’हरीसंग आग्रह गरेको गौतमले बताए ।
उनले कसलाई अधिवक्ता राखेको भनेर आफुले सोधेको र अब कसरी जाने भन्ने विषयमा कुरा भएको गौतमले बताए । हात का’टेर पलको होइन्, अरु कसैको नाम ? गायिकाकै घरबेटीले खोले वास्तविकता ।। मुद्धा हाल्छु भन्छन् ।पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
मोरङ जिल्लाको नया मङ्गलबारे वडा नम्बर ३ घर भएर बसोबास गर्दै आएका बिरेन्द्र चक्रमण्डल नाम गरेका एक पुरुष आफ्नी मोनिकादेबी मण्डल नाम गरेकी श्रीमती छोरासहित साँढे चौरासी हजार रुपैयाँ, चार आना सुन र २५ तोला चाँदीसहित अर्कै पुरुषसँग फ”रा”र भएको बताउँदै मिडियामा सहयोगको अपेक्षाका साथ आएका छ्न । आफूले खाई नखाई गरेर आईसक्रीम बेचेर नानिको इन्डियाको भा”क”लको लागि छुट्टाएको पैसा समेत श्रीमतीले कु”म्ल्या”ए”र हिडेको बताउँछ्न उनी । श्रीमती र ना”ठो”को फोटोसहित मिडियामा आएका छ्न उनी ।
श्रीमतीको खोजी कहाँकहाँ चाहिँ गरेनन उनले तर उनको केहि जोर न”च”लेप”छी अन्ततः मिडियामा आएका छ्न उनी । पुलिस प्रशासनमा उनले श्रीमती हराएको खबर दिईसकेका छ्न । आफूलाई श्रीमतीले भ”गा”ए”को पुरुषको बारेमा पनि थाहा भएको उनले बताए, उक्त पुरुषको साहुमार्फत फोन गरेर उक्त पुरुषलाई बोलाउँदा पनि अनेक बहाना गरेर नआउने गरेको उनले बताए । उसलाई श्रीमतीको सम्पर्क नम्बर पनि मा”गे”को तर उसले पुरानो सम्पर्क नम्बर दिएको जुन नम्बरमा ब्ल”क गरिसकेको उनले बताए ।
जोगबनी बसोबास गर्दै आएको कन्हैया नाम गरेको उक्त पुरुष महोत्सब मेलामा बेलुन खेलौना इत्यादि बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । आफ्नि श्रीमती कन्हैयासँग नै गएको भन्ने कुरामा आफू बिश्वस्त रहेको उनले बताए । बिराटनगर र जोगबनिमा फोटो देखाउँदै श्रीमतीको खोजीसमेत गरेका रहेछन उनले । उनको श्रीमतीलाई अर्कै पुरुषसँग कोठा खोज्दै गर्दा केही दोकानदारहरुले देखेका पनि रहेछ्न ।
नानिको यादमा रुँ”दा”रुँ”दा आँखाबाट आँ”सु समेत रि”त्ती”सकेको बताउँछ्न उनी । नानिले आफ्नो चौ”पट्टै माया गर्ने गरेको र आफू आईसक्रीम बेच्न जाँदा साथ नै न”छो”ड्ने समेत भन्ने गरेको उनले बताए । उनको यो दोस्रो बिबाह रहेको र जेठि श्रीमतीको भने क्या”न्सरको कारण मृ”त्यु भएको उनले बताए । श्रीमतीलाई उनको मनखुसी गर्न दिने बताउँछ्न उनी । ससुराली पक्षबाट आफूलाई छोरी खै भनेर त”ना”व दिनेगरेको बताउँछ्न उनी ।
श्रीमतीले यदि आफुसँगै बस्न अझैपनि चाह्यो भने आफूसँगै राख्न तयार रहेको उनको भनाई छ । ईन्डियाको मान्छेलाई आफ्नो श्रीमतीको नम्बर कसरी थाहा भयो भन्दै शं”का”लु पारामा कन्हैयाले नै आफ्नो श्रीमतीलाई भ”गा”ए”को बताउँछ्न उनी । कन्हैया पहिले नै बिबाहित रहेको र श्रीमती र छोराछोरिको बि”जो”ग बनाएर हिडेको उनले बताईन । उनकि श्रीमतीले भने कन्हैयालाई सबैसामु माइती भनेर चिनाएकी रहिछिन । बारिमा काम गर्दा समेत लु”कि”लु”की फोनमा बोल्ने गरेको एक स्थानिय महिलाले बताईन ।
बाँकी हेर्नुहोस तलको भिडियोमा :- https://youtu.be/KmGthW1mr8k
गायिकाकै घरबेटीले खोले वास्तविकता